Askarigii ku diley gacantiisa Fazul Cabdalla oo wareysigii ugu horeeyey bixiyey+Sawiro – SBC
Askarigii ku diley gacantiisa Fazul Cabdalla oo wareysigii ugu horeeyey bixiyey+Sawiro
Wakaalada wararka AP ayaa warbixin khaas ah oo ay daabacdey waxay kaga hadashay qaabkii uu dhacay dilkii lagu diley hogaamiyihii Al-Qaacidada bariga Afrika, isla markaana ahaa maskaxdii ka dambeysay weeraradii lagu ekeeyey safaaradaha Mareykanka ee wadamada Kenya & Tanzania Fasul Cabdalla.
AP ayaa wareysatey askari 22 jir ah oo ahaa ninkii gacantiisa ku diley Fasul Cabdalla Maxamed, askarigaasi oo ahaa wiil lagu magacaabo Cabdi Xasan, sida AP qortey baabuur nooca Toyota SUV oo madow ayaa ku soo istaagey jidgooyo ku taal magaalada Muqdisho, xiligu wuxuu ahaa habeen hadaba maxaa dhacay. Cabdi Xasan oo ah askariga dhacdadan ka sheekeynaya ayaa yiri “Gaarigu markii uu soo istaagey barta koontarool waxaan ku armar wadaha gaariga in uu damiyo layrarka hore isla markaana uu shido leyrka gudaha”. Ka dib wadihii gaariga ayaa ku jawaabay “Waa odayaashii” taasi oo uu ula jeeday gaariga dadka saaran magacaasi oo ah magac loogu yeero madaxda sar sar ee ururka Al-Shabaab.
“ Ma garanayo odayaash” ayuu ku jawaabay askari Cabdi, taasi oo darawalka gaariga u muujisay inaanay ka gudbi karin jidgooyada si fudud. Hadaba maxaa dhacay? Sida muuqanaysa gaariga waxaa wadey ninka lala diley Fasul Cabdalla oo magaciisa lagu sheegay Cabdulaahi Dheere oo ka mid ahaa saraakiisha sar sar ee Al-Shabaab, wadaha gaariga wuxuu qaatey amarkii askariga ka dibna wuxuu shiday larkii gudaha ee gaariga.
Meydka Fazul & ninkii la diley (sawirka Reuters)
“Markii layrka la shiday waxaan arkay darawalka oo geestiisa ay taal baastoolad, iyadoo ninka kale ee kusriga rakaabka dhabta uu uu saarnaa qori AK 47 ah” ayuu yiri Cabdi.
Ka dib askari Cabdi Xasan wuxuu ku qayliyey “Ha qaadin qoriga”, isagoo qorigiisa ku soo beegaya ninka qoriga sita, ka dibna ninkii fadhiyey kuriga rakaabka oo la aaminsan yahay in uu ahaa Fasul Cabdalla ayaa ku qayliyey wadaha oo ku yiri ninka dil oo Bistoolada ku dufo, wadihii gaariga ayaa damcay in uu Bistoolada ku dhufto askari laakiin way ka dabintay (dhiciwayday) Intaasi ka dib askari Cabdi Xasan wuxuu sheegay inuu qorigiisa rasaastii ku jirtey oo dhan in uu ku afuufo gaariga iyo waxa saaran, wuxuu sheegay in 30-kii xabo ee qasnada in uu ku dhameeyey nimankii iyo gaariga la socdey.
Ka dib markii ay joogsatey rasaasta Cabdi Xasan wuxuu ka warheley in ay meyd yihiin labada nin gaariga saarnaa, halkaasi ay dhulka soo dhigeen, gaarigana laga helay waxyaabo kala duwan oo ay ka mid yihin qoryo, lacag, waraaqo & waliba Lap top. Askari Cabdi Xasan wuxuu rumaysan yahay in qof kale oo sadexaad uu saarnaa gaariga xagiisa dambe kaasi oo ka baxsadey rasaasta isa markaana ka booday gaariga qaybtiisa dambe maadama qaybta dame ee gaariga ay furneyd.
“Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan dilo qaswadihii, ducadii & baryadii ummada Soomaaliyeed waa la aqbalay” ayuu ku yiri Cabdi Xasan wareysiga AP ay la yeelatey oo ahaa mid telefoon lagula yeeshay, isagoo intaasi ku darey in isagu (Fasul) uu ahaa dhibtaada Soomaaliya. Abaalmarinta $ 5-ta milyan ee dultiil madaxa Fasul Cabdalla Dawlada Mareykanku waxay horey ugu yaboohdey inay ku bixinayso dilka ama qabashada Fasul Cabdalla aduun lacageed oo gaaraya 5 milyan oo doolar, iyadoo la siinayo qofkaasi arimahaasi fudadeeya, hadaba Cabdi Xasan oo ah askariga la sheegay in uu gacantiis aku diley Fasul Cabdalla muxuu ka aaminsan yahay in lacagtaasi la siiyo iyo in kale.
“Ma doonayo inaan waqti ku dhumiyo ama aan ka fakaro inaan helayo abaalmarintaasi” ayuu yiri Cabdi Xasan, iyadoo abaalmarintaasi aanay wali ka hadli dawlada Mareykanka. Fasul Cabdalla oo u dhashay jasiiradaha Comoros mudo ku dhaw 15 sano ayaa Mareykanku baacsaneyey iyagoo ku eedeeynayey in uu ahaa ninkii abaabulay weeraradii safaaradaha Ameerikaanka ee magaalooyinka Nairobi & Darasalaam, waxaana weerarkaasi ku dhintey 224 qof oo ay ka mid ahaayeen in ka badan 10 qof oo Mareykan ah.
Halkan ka akhri waa kuma Fazul Cabdalla
Juun 15, 2011 at 2:04 pm
Muqdisho Dadki u Dhashay waa ka Barakiciyeen Denbilayaal
Aan u dhalan Dalka Somaliya bay ku Hayaan oo Nabad ku Jogah.Ninka dilay Denbilahas Nabadgeliyo Allaha siyo.
Sidaas Muqdisho Xaalkeedu Yahay bay Deganada Nabbada Samaystay Xataa Rabaan in ay kala Mid Dhigaan Kuwaas Aan sida Fican Maskaxdoodu u Shaqayn Wadanka Halga Qabto.